Al-Shabaab oo xukun ku fulisay askar ka tirsanayd DF | KEYDMEDIA ENGLISH
Al-Shabaab oo xukun ku fulisay askar ka tirsanayd DF
Kooxda Al Shabaab ayaa maanta xukun toogasho ah ku fulisay, Labo nin oo ay sheegeen, in ay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
KUUNYA-BARROW, Soomaaliya- Kooxda Al-Shabaab ayaa maanta xukun toogasho ah ku fulisay labo askari oo ka tirsanaa ciidamada Dowladda Soomaaliya, waxaana xukunka toogashada uu ka dhacay meel fagaar ah oo ku taalla, tuulo hoos tagta degaanka Kuunya-barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ragga ay maanta toogteen ayey sheegeen in ay ka kala tirsanaayeen booliska iyo nabad sugidda Soomaaliya, waxaana magacyadooda ay ku kala sheegeen, Yooni Macallin Xasan, iyo Maxamed Nuur Xasan.
Sida ay sheegeen Al-Shabaab, labada askari ayaa ka howl galli jiray magaalooyinka Marka Iyo Baydhabo, waxaana laga soo qabtay degaanka Jilib-Marka, iyagoo ku wajahan magaalada Afgooye, ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Dadka deggaanka ayey ku qasbeen in ay u soo daawasho tagaan, toogashada raggan lagu fulinayo, iyadoo dilka ka dibna dadka deggaanka looga digay in ay la shaqeeyaan hay'adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya.
Al-Shabaab, ayaa gudaha dalka si joogta ah uga gaysta, dhibaatooyin ay ka mid yihiin dilal, qaraxyo, iyo handadaad, waana kuwa ka soo horjeeda hannaanka dowladnimo ee Soomaaliya.